Friday August 18, 2017 - 19:38:49 in Articles by Super Admin
Waagacusub.net - Saraakiil ay ka mid yihiin Afhayeenka Amisom Jeneral Subagle oo u dhashay qabiilka Ciisaha Jibouti ee Dirta ayaa hub iyo gabaad siiyay Maleeshiyaad beesha Biyomaal u dhashay oo xasuuq baahsan kula kacay dad rayida oo u dhashay beels
Waagacusub.net - Saraakiil ay ka mid yihiin Afhayeenka Amisom Jeneral Subagle oo u dhashay qabiilka Ciisaha Jibouti ee Dirta ayaa hub iyo gabaad siiyay Maleeshiyaad beesha Biyomaal u dhashay oo xasuuq baahsan kula kacay dad rayida oo u dhashay beelsha Hawiye.
Nabadoonka Qabiilka Abgaal ee gobolka Shabeeladda hoose Nabadoon Feyte oo Waagacusub Media u waramay ayaa sheegay iney Amisom madaafiic ku garaacday kadib markii ay dagaal ku jibiyeen Maleeshiyaad u dhashay Biyomaal oo dagaal ooge Abdullahi Waafow watay.
Nabadoonka wuxuu sheegay iney u diyaar garoobayaan sidii ay gobolka Shabeeladda hoose uga saari lahaayeen Ciidanka AMISOM ee Jeneral Subagle wato maadama uu ku biiray dagaal qabiileedka ka socda Shabeeladda hoose isagoo la saftay kuwa beesha uu ka dhashay ee DIR.
Afhayeenka dhalinyaradda Hawiye ee Shabeeladda hoose Mr Mohamed Abdi Ali [Qoslaaye] ayaa tilmaamay inuu Jeneral Subagle hub iyo gabaad siiyay Maleeshiyadda Biyomaal ee Abdullahi Gaafow hogaamiyo ,taas oo ka dhigan inuu Jeneral Subagle noqday nin qabiilkiisa DIR la saftay.
Sawir Warbaahinta Waagacusub heshay ayaa wuxuu muujinayaa dagaal ooge Abdullahi Waafow oo la fadhiya Taliyaha AMISOM ee Shabeeladda hoose Kayunga Mahinga.
Maleeshiyadda qabiilka Biyomaal u dhalatay waxeey Shabeeladda hoose ku xasuuqeen dad u dhashay qabiilka Hawiye ,sidoo kalena waxeey gubeen beerro iyo guryo ay leeyihiin.
Dadka la xasuuqay waxaa ka mida Gudoomiyahii u horeeyay ee Markacadeey Amb Ahmed Gure Mamuun iyo wiil uu awoowe u yahay oo lagu gubay aqal mudul ku yaal beer ay deganaayeen degaanka Janaale.
Dagaal ooge Abdullahi Gaafoow oo Tv Royal ka hadlay wuxuu sheegay inuu xasuuqa wadi doono ,inta qof Hawiye ah joogo Shabeeladda hoose.
Sikastaba ha ahaatee, Dhalinyaradda Hawiye ayaa inta badan Magaaladda Markacadeey la wareegay gacan ku heeynta kadib dagaal qaraar oo ay la galeen kuwa Biyomaal oo hadda ku hoos nool Ciidanka AMISOM.